China Hupenyu Size marble Chiumbwa cheMukadzi weGomo reKarmeri Kutengesa Kugadzira uye Fekitori | Unyanzvi Hwakanaka
Hupenyu Hurefu marble Chiumbwa cheMukadzi weGomo reKarmeri ye ...
Factory kuburitsa kunyura kwezuva pink marble shumba chifananidzo chiri kutengeswa
Gadzirisa Pair yeShumba Zvidhori Dombo Shumba Zvidhori fo ...
Yakajairwa saizi yakanaka yemarble tiger zvifananidzo zvekutengesa
Yakajairwa saizi yakavhenganiswa yemavara bhiza marble zvifananidzo
Hupenyu Hurefu marble Chiumbwa cheMukadzi weGomo reKarmeri Kutengeswa
Model Nhamba: FMQ-225
Kukura: H: 170 cm kana yakagadzirirwa
Kubhadhara: T / T, Western Union
Kune chero kereke inokurudzira kutenda uye kuzvipira kuMhandara Maria, iyo saizi-yehukuru hwehupenyu hweMhandara Maria paGomo reKarimeri ndiyo hunyanzvi hwemweya. Chiumbwa chedu chakagadzirwa nemarble chaiwo. Uye chigadzirwa chacho chakakodzera kushandiswa kwemukati nekunze.
Chirevo chaKarmeri chinoshamisa chose, asi sekufunga kwaSanta Teresa, anotarisira kuti mwanasikana wake haachazove mupostori, uye kuti mwanasikana wake anokwanisa kubatsira machechi nevafundisi nekukudza humambo hwaMwari. , Ivo vane shungu dzekugamuchira kushingairira kwekunamatira kwepasi rese.
Yedu marble chivezwa chakavezwa-ruoko, uye Chechi yeMukadzi Wedu weGomo San Carmel inobata mwana akanaka muruboshwe, akapfeka korona yakanaka uye jasi rakanaka. Akasimudza tsoka, achitarisira ramangwana, achinyemwerera pachiso chake uye nemhuno yakanaka, achiratidza hunhu, hunyoro, hunofara uye hunochengeterwa hunhu hweMhandara, uyo anobata zvese zvizere. Nguo yakasununguka yakakomberedza muviri wese kubva kumusoro, uye iyo pateni inoshandura Natural uye chic, ingave iri korona pateni, iko kumisvo yenguwo kana iyo yakasara yechifananidzo.
Chiumbwa cheMhandara Saint Carmel chakagadzirwa nechena machena machena. Ichi chiumbwa chemhando yepamusoro chemarble, chakasimba kwazvo, chakanakira kushandiswa kwemukati nekunze, uye chinogona kushandiswa munzvimbo dzakashata dzemamiriro ekunze. Yedu ese marble zvivezwa zvakagadzirwa nemaoko nehunyanzvi marble emhizha uye vane nhoroondo refu mukugadzira zvidhori zvechitendero.
Ruoko-rwakavezwa neyedu nyanzvi marble muvezi. Zvese zvese zvakagadziriswa zvakakwana. Kana iwe uchifarira zvivezwa zvedu zvechitendero, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu kuti uwane ruzivo rwechigadzirwa. Ehezve, iwe unogona zvakare kuona zvimwe zvivezwa zvigadzirwa pano.
Pashure: ruoko rwakavezwa chena machena machena kupaza Kutengesa
Zvadaro: Tsika Yakagadzirwa yemarble St Michael pane Teyepac Chikomo chidhori chiri Kutengeswa
Factory nzira yokubudisa akanaka machena machena Mhandara Ma ...
Tsika Yakagadzirwa emhuri zvifananidzo zvechitendero Zvekutengesa
yakanaka marble chifananidzo cheMweya Mutsvene we ...
Kunze kwemabhuru kunamatira mukadzi wedu weLourdes st ...
Hupenyu Hukuru Chitendero Zvifananidzo zveSt.Francis Gard ...
Factory kuburitsa machena pieta chifananidzo chiri kutengeswa